ပန်းသီးရဲ့ အကျိုး ကျေးဇူး -
ပန်းသီးကို စားသုံးခြင်း သက်သက် တင်မက အလှအပ အတွက် အသုံးပြု လို့လည်း ရရှိနိုင်တယ် ဆိုတာ သင် သိပါရဲ့လား…. တစ်နေ့ကို ပန်းသီးတစ်လုံး တစ်လုံး စားသုံးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို သာမက သင့် အလှအပ အတွက်လည်း အကျိုးထူး လှပါတယ် ။
သင့်အသား အရောင်ကို ဖြူဝင်း တောက်ပ စေနိုင်တာလည်း ပန်းသီးရဲ့ အာနိသင် ပါပဲ ။ပန်းသီးစားခြင်း အကျိုးဟာ အသားအရေကို နုညံ တောက်ပ စေပါတယ် ။ အရေပြားကို တင်းရင်းစေတဲ့ ကိုလာဂျင်နဲ့ အီလက်စတင် ထုတ်လုပ်မှူကို များစေလို့ နုပျိုစေပါတယ် ။
အနီရောင် ပန်းသီးဟာ သင့်အသားအရေကို ပန်းသွေးရောင် ကြွစေ ပါလိမ့်မယ် ။
ပန်းသီးဟာ သင့် အရေပြားတွေကို ရေဓာတ် ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်ပေးပါတယ် ။ ပန်းသီးကို အစိပ်စိပ်ပြီး သင့် မျက်နှာပြင်မှာ ပန်းသီး အရည်များကို ကုန်သွားသည်အထိ ခပ်ဖွဖွ ပွတ်လိမ်းပေးပါ ။
မျက်နှာပြင်ပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ပြီး အဆီထုတ်လုပ်မှူကို ထိန်းညှိ ပေးပါလိမ့်မယ် ။
ပန်းသီးထဲမှာ အိုမင်းရင့်ရော်မှူကို တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ် ။ ပန်းသီးကို နေ့စဉ် ပုံမှန် စားသုံးပေးပါ ။ သင့်မျက်နှာ ပြင်ပေါ်က အရေးအကြောင်းများကို လျော့ပါးစေပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းလှ လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မျက်နှာပြင်အနှံ ပန်းသီးအရည်နဲ့ ပွတ်ပေးပြီးမိနစ် ၂၀ကြာထားပါ ။ ပြီးလျှင် ရေအေးနဲ့ သန့်စင်ပေးပါ ။ အရေးအကြောင်းများ ကင်းစင်ပြီး နုပျို လှပ လာပါလိမ့်မယ် ။
မျက်ကွင်းညိုခြင်း မျက်အိတ် ရောင်ခြင်း
ပန်းသီးကို ခ်ပါးပါးလှီးပြီး မျက်လုံးပေါ် တင်ထားပေးပါ ။ မျက်ကွင်းညိုတာနဲ့ မျက်အိတ်ရောင်ခြင်းကို သက်သာ စေပါတယ် ။ပန်းသီးရှာလကာရည် လက်ဘက်စားဇွန်း နှစ်ဇွန်းစာကို
ကြိတ်ချေထားတဲ့ အာလူးတစ်လုံးစာနဲ့ ရောပြီး မျက်လုံးတစ်ဝှူိက် ကွင်းပေးကာ
ရေနွေး စိမ်ထားတဲ့ အဝတ်စနဲ့ အုပ်ပေးပါ ။
ဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့် အကြာတွင် ရေကြက်သီးနွေးနဲ့ ဆေးကြောပေးပါ ။ သင့်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မျက်ကွင်းညိုခြင်း မျက်အိတ် ရောင်ခြင်းများကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါ လိမ့်မယ် ။
ပန်းသီးထဲမှာ ဗီတာမင် အေ ပါဝင်တဲ့အတွက် မရင့်မှဲ့ သေးတဲ့အရေပြားဆဲလ်တွေကို ပုံမှန်ဖြစ်စေရန် ထောက်ကူတဲ့ အရေပြား တစ်သျူးတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောငိတာမှာ အဓိက ကျတဲ့ နေရာက ပံပိုးပေးပါတယ် ။
အရေပြားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှူကို လျော့ကျစေပါတယ် ။ ပန်းသီး အရွယ်တော်တစ်လုံး ကနေ ဗီတာမင် A120I U ကိုရရှိနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် ၄.၅ ရာခိုင်နှူန်းကို ရရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
ပနျးသီးရဲ့ အကြိုး ကြေးဇူး
ပနျးသီးကို စားသုံးခွငျး သကျသကျ တငျမက အလှအပ အတှကျ အသုံးပွု လို့လညျး ရရှိနိုငျတယျ ဆိုတာ သငျ သိပါရဲ့လား…. တဈနကေို့ ပနျးသီးတဈလုံး တဈလုံး စားသုံးခွငျးဟာ သငျ့ရဲ့ကနျြးမာရေးကို သာမက သငျ့ အလှအပ အတှကျလညျး အကြိုးထူး လှပါတယျ ။
သငျ့အသား အရောငျကို ဖွူဝငျး တောကျပ စနေိုငျတာလညျး ပနျးသီးရဲ့ အာနိသငျ ပါပဲ ။ပနျးသီးစားခွငျး အကြိုးဟာ အသားအရကေို နုညံ တောကျပ စပေါတယျ ။ အရပွေားကို တငျးရငျးစတေဲ့ ကိုလာဂငျြနဲ့ အီလကျစတငျ ထုတျလုပျမှူကို မြားစလေို့ နုပြိုစပေါတယျ ။
အနီရောငျ ပနျးသီးဟာ သငျ့အသားအရကေို ပနျးသှေးရောငျ ကွှစေ ပါလိမျ့မယျ ။
ပနျးသီးဟာ သငျ့ အရပွေားတှကေို ရဓောတျ ပွညျ့ဝစှာ ဖွညျ့ပေးပါတယျ ။ ပနျးသီးကို အစိပျစိပျပွီး သငျ့ မကျြနှာပွငျမှာ ပနျးသီး အရညျမြားကို ကုနျသှားသညျအထိ ခပျဖှဖှ ပှတျလိမျးပေးပါ ။
မကျြနှာပွငျပျေါက ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပဈပွီး အဆီထုတျလုပျမှူကို ထိနျးညှိ ပေးပါလိမျ့မယျ ။
ပနျးသီးထဲမှာ အိုမငျးရငျ့ရျောမှူကို တားဆီးပေးနိုငျတဲ့ ဓာတျပေါငျးတှေ ပါဝငျပါတယျ ။ ပနျးသီးကို နစေ့ဉျ ပုံမှနျ စားသုံးပေးပါ ။ သငျ့မကျြနှာ ပွငျပျေါက အရေးအကွောငျးမြားကို လြော့ပါးစပွေီး အသားအရကေို တငျးရငျးလှ လာစမှော ဖွဈပါတယျ ။
မကျြနှာပွငျအနှံ ပနျးသီးအရညျနဲ့ ပှတျပေးပွီးမိနဈ ၂၀ကွာထားပါ ။ ပွီးလြှငျ ရအေေးနဲ့ သနျ့စငျပေးပါ ။ အရေးအကွောငျးမြား ကငျးစငျပွီး နုပြို လှပ လာပါလိမျ့မယျ ။
မကျြကှငျးညိုခွငျး မကျြအိတျ ရောငျခွငျး
ပနျးသီးကို ချပါးပါးလှီးပွီး မကျြလုံးပျေါ တငျထားပေးပါ ။ မကျြကှငျးညိုတာနဲ့ မကျြအိတျရောငျခွငျးကို သကျသာ စပေါတယျ ။ပနျးသီးရှာလကာရညျ လကျဘကျစားဇှနျး နှဈဇှနျးစာကို
ကွိတျခထြေားတဲ့ အာလူးတဈလုံးစာနဲ့ ရောပွီး မကျြလုံးတဈဝှူိကျ ကှငျးပေးကာ
ရနှေေး စိမျထားတဲ့ အဝတျစနဲ့ အုပျပေးပါ ။
ဆယျမိနဈ ဆယျ့ငါးမိနဈခနျ့ အကွာတှငျ ရကွေကျသီးနှေးနဲ့ ဆေးကွောပေးပါ ။ သငျ့မှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့ မကျြကှငျးညိုခွငျး မကျြအိတျ ရောငျခွငျးမြားကို သကျသာ ပြောကျကငျးစပေါ လိမျ့မယျ ။
ပနျးသီးထဲမှာ ဗီတာမငျ အေ ပါဝငျတဲ့အတှကျ မရငျ့မှဲ့ သေးတဲ့အရပွေားဆဲလျတှကေို ပုံမှနျဖွဈစရေနျ ထောကျကူတဲ့ အရပွေား တဈသြူးတှရေဲ့ လုပျငနျးဆောငိတာမှာ အဓိက ကတြဲ့ နရောက ပံပိုးပေးပါတယျ ။
အရပွေားကငျဆာဖွဈပှားမှူကို လြော့ကစြပေါတယျ ။ ပနျးသီး အရှယျတျောတဈလုံး ကနေ ဗီတာမငျ A120I U ကိုရရှိနိုငျပွီး ခန်ဓာကိုယျ ၄.၅ ရာခိုငျနှူနျးကို ရရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ ။